१८ देशमा फैलिसकेकाे घा`तक राेग मङ्कीपक्स; कस्तो रोग हो, कसरी सर्छ र जाेखिम कति छ त ? - Mitho Khabar
१८ देशमा फैलिसकेकाे घा`तक राेग मङ्कीपक्स; कस्तो रोग हो, कसरी सर्छ र जाेखिम कति छ त ?
June 18, 2022 mithokhabarLeaveaComment on १८ देशमा फैलिसकेकाे घा`तक राेग मङ्कीपक्स; कस्तो रोग हो, कसरी सर्छ र जाेखिम कति छ त ?
मङ्कीप`क्स गराउने भा`इरस बि`फर भाइरसकै वर्गमा पर्छ। यद्यपि यो कम गम्भीर र कम सङ्क्रामक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । यो रोग प्रायः मध्य र पश्चिम अ`फ्रिकी देशहरूका उष्णतटीय वर्षावननजिक रहेका दुर्गम भेगहरूमा पाइन्छ । त्यहाँ यो भा`इरसका पश्चिम अफ्रिकी र मध्य अफ्रिकी गरी दुईवटा प्रकार छन् ।
यूकेमा फेला परेका दुईजना बिरामीहरू नाइजिरियाबाट आएका थिए । त्यसैले उनीहरू पश्चिम अफ्रिकी भा`इरसबाट सङ्क्रमित भएको हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यसले प्रायः मध्यम खालका असरहरू पार्छ । यद्यपि यो अझै पुष्टि भएको भने छैन । मङ्कीप`क्स भा`इरस सरेका तेस्रा व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी हुन् । उनलाई बिरामीबाट सङ्क्रमण सरेको थियो ।
भर्खरै फेला परेका चार सङ्क्रमितमध्ये तीन जना लन्डनमा र एक जना उत्तरपूर्वी इङ्ग्ल्यान्डमा छन् । तर उनीहरूको एकअर्कासँग सम्बन्ध छैन र उनीहरू देशबाहिर अन्यत्र गएका पन छैनन् । उनीहरूलाई यूकेमै सङ्क्रमण भएको देखिन्छ । यूकेएचएसएका अनुसार आफूलाई यो भाइरस सर्न सक्छ भन्ने डर भएका व्यक्तिले स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिन सक्छन् ।
यसका लक्षणहरू;- सङ्क्रमणका प्रारम्भिक लक्षणमा ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, जीउ सुन्निनु, ढाड दुख्नु, मांसपेशी दुख्नु र छटपटी हुनु पर्छन् । एक पटक ज्वरो आएपछि सुरुमा अनुहार हुँदै शरीरका अन्य भागहरू, प्रायः हत्केला र पैतालामा डा`बर देखा पर्न सक्छ । त्यस्ता डा`बरहरू अत्यन्तै चि`लाउने हुनसक्छन् । डा`बरमा पा`प्रा लाग्नुअघि विभिन्न चरणमा परिवर्तन हुन्छ र पछि उ`प्कि`न्छ । सङ्क्रमणका कारण भएको घा`उ १४ देखि २१ दिनसम्म रहन्छ र सामान्यतया आफैँ हराउँछ ।
सङ्क्रमण कसरी हुन्छ:- सङ्क्रमित व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आउँदा मङ्कीपक्स स`र्छ । फुटे`को छा`ला, श्वासनली वा आँखा, नाक वा मुखबाट यो भा`इरस शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ । यसलाई यौ..,बाट सर्ने सङ्क्रमणको रूपमा व्याख्या गरिएको छैन तर शा`री`रिक स`म्ब`न्धको क्रममा प्रत्यक्ष स`म्पर्कमार्फत् पनि यो सर्न सक्छ । त्यस्तै बाँदर, मु`सालगायत जनावर र भा`इरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट पनि फैलिन सक्छ ।
यो कति ख`तरनाक छ त:- यस भाइरसले मध्यम खालका असरहरू गर्छ कहिलेकाहीँ यसका प्रभावहरू ठे`उ`ला हुँदा जस्तै देखिन्छन् र केही सातामै निको हुन्छ यद्यपि यो भाइरसको सङ्क्रमण कहिलेकाहीँ निकै गम्भीर हुनसक्छ र मङ्कीपक्सका कारण पश्चिम अफ्रिकामा बिरामको मृ- त्यु भएको समेत पुष्टि भएको छ ।
यसको प्र`कोप कति सामान्य:- थुनेर राखिएको एउटा बाँदरमा यो भाइरस पहिलो पटक पहिचान गरिएको थियो । सन् १९७० देखि नै अ`फ्रिकाका १० वटा देशमा यो भाइरसका कारण प्र`कोप निम्तिएको देखिएको छ । सन् २००३ मा अमेरिकामा यसको `प्रकोप देखियो । मङ्कीपक्स अ`फ्रिकाबाहिर देखिएको त्यो पहिलो पटक थियो ।
त्यतिबेला देशमा आयातित विभिन्न साना स्तनधारी प्राणीबाट समथल भागमा पाइने कुकुरहरू सङ्क्रमित भएका थिए । कुकुरबाट मानिसलाई सङ्क्रमण सरेको थियो । कुल ८१ जनामा सङ्क्रमण देखिएको भए पनि कसैको उक्त भाइरसका कारण मृ- त्यु भएको थिएन ।
अभिलेखहरूका अनुसार सन् २०१७ मा नाइजिरियामा यसको सबैभन्दा ठूलो प्र`कोप देखियो । त्यसअघि देशमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको लगभग ४० वर्षपछि त्यहाँ नयाँ सङ्क्रमण देखिएको थियो । त्यहाँ १७२ जनामा मङ्कीपक्स देखिएको अनुमान थियो । तीमध्ये ७५ प्रतिशत सङ्क्रमितहरू २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका पुरुष थिए ।
के छ तउपचार विधि:-मङ्कीपक्सको अहिलेसम्म कुनै उपचार छैन तर सङ्क्रमण रोकथाम र प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यो भा`इरसको सङ्क्रमण रोक्नको निम्ति बिफरविरुद्धको खोप ८५ प्रतिशत प्रभावकारी साबित भएको छ र अझै पनि त्यसको प्रयोग गरिन्छ ।
के सर्वसाधारणले ड`राउनुपर्छ:- विज्ञहरूले यूकेमा मङ्कीपक्सको देशव्यापी प्रकोपको जोखिम नरहेको बताएका छन् र पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्यान्डले जनताका लागि जोखिम कम भएको जनाएको छ । नटिङ्गम विश्वविद्यालयका मलेक्यलर भा`इरोलजीका प्राध्यापक जोनाथन बलले भने, ‘सुरुमा मङ्कीपक्सबाट सङ्क्रमित बिरामीसँग सम्पर्कमा आएका ५० जनामध्ये एक जना मात्र सङ्क्रमित भएको तथ्यले भाइरस कति सङ्क्रामक छ भन्ने देखाउँछ ।’
उनका अनुसार यसले देशभरि प्र`कोप आउन लागेको सङ्केत गर्दैन । पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्यान्ड पीएचईमा न्याश्नल इन्फेक्शन सर्भिसका कार्यकारी निर्देशक डा। निक फिनले भने, ‘मङ्कीपक्स मानिसमा सहजै सर्दैन र सर्वसाधारण मानिसमा हुने जोखिम निकै कम छ भन्ने कुरामा जोड दिनु महत्त्वपूर्ण छ ।´ पीएचईले बिरामीसँग नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई परामर्श दिन र उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार अनुगमन गरिरहेको छ ।